Gentoo Linux Torolàlana momba ny fametrahana an-dàlana | Avy amin'ny Linux
Gentoo Linux dia fizarana Linux mifantoka amin'ny mpampiasa miaraka amin'ny azo antoka traikefa fa miavaka amin'ny fanaingoana azy ary hafainganam-pandehaAmin'ity lahatsoratra ity dia mizara fampianarana an-dàlana ho an'ny fametrahana sy ny fanaingoana marina.
Ity dia fandraisana anjara avy amin'ny Tete Plaza, ka lasa iray amin'ireo nandresy tamin'ny fifaninanana isan-kerinandro: «Mizarà izay fantatrao momba ny Linux«. Arahabaina ry Tete!
Voalohany indrindra tiako horesahina fa ny zavatra rehetra ilain'ny olona dia ao amin'ny Gentoo Wiki, na amin'ny Arch Wiki, ny fanontaniana mifandraika amin'ny fametrahana dia ao amin'ny boky boky Gentoo. Ataoko ity fampianarana ity satria olona maro no nangataka ahy momba an'io, ary satria hanampy ny granite fanaingoako aho rehefa mametraka Gentoo.
Fantaro fa ny olona mamaky dia tena ankasitrahana amin'ity distro ity. Eny, distro izy io izay ahafahana mamaha ny ankamaroan'ny olana amin'ny alàlan'ny famakiana wiki sy fanaovana fikarohana kely (izany hoe raha manontany zavatra ianao ary mamaly "jereo ny wiki" dia midika izany fa amin'ny maha Gentoo mpampiasa anao dia tsy manao zavatra mety xD). Tsy midika akory izany fa ny fanontaniana "tsotra" dia tsy voavaly, fa ny habetsaky ny antontan-taratasy dia manome soso-kevitra ny hamaky hamahana ny olany.
Ankehitriny aho hanome hevitra, amin'ny kapoka malalaka, ny momba an'i Gentoo, ny zavatra mahavariana momba azy, ary ny mampiavaka azy amin'ny distro Linux hafa. Hieritreritra izahay fa ny Gentoo dia code code based distro. Inona no dikan'ity? Tsy toy ny distro mahazatra (precompiled) toa an'i Debian, Ubuntu, Arch, Manjaro, Fedora, SUSE, sns lava sns. Rehefa mametraka fonosana iray dia tsy misintona ny azo ampiharina (binary, .deb, .rpm, .pkg.tar.xz, sns) ary mametraka azy, fa kosa misintona ny kaody loharanom-pahalehibeny, manangona izany araky ny fikirakirantsika sy ny fitsipika izay ananantsika. voafaritra ho an'ny fonosana, ary miaraka amin'izany dia miteraka fanatanterahana, izay avy eo mametraka.
Ny tombony azon'ny Gentoo
Ny mahatonga an'i Gentoo distro tsy manam-paharoa dia tsy ny famoriany ireo fonosana ihany fa ny iray manapa-kevitra ny amin'ny fanohanana izay asongadin'ny fonosana tsirairay. Ny vokany mivantana amin'ny fanaingoana sy ny fanangonana ny
fonosana, no hafainganam-pandeha. Fa maninona Andao asehoy ohatra izany.
Ny maha X distro efa voaomana azy (izay noresahiko tetsy ambony), mba hahafahana mampiditra ny distro X amin'ny karazana masinina isan-karazany, ilaina ny manangona ireo fonosany miaraka amin'ireo torolàlana nomen'ilay masinina tranainy kokoa. Amin'izany fomba izany, raha tiantsika ny hihazakazaka manomboka amin'ny Pentium II izy ireo, dia hanangona ny fonosan'izy ireo miaraka amin'ny torolàlana fampianarana Pentium II.
Inona no vokatr'izany? Raha amin'ny mpikirakira vaovao kokoa, ohatra, hoe i7, ny fonosana dia tsy hanararaotra ny fahafaha-manao rehetra natolotry ny farany, satria raha atambatra miaraka amin'ireo andiana torolàlana nomen'ny i7 izy ireo dia tsy hovonoina ho faty ao processeur alohan'ity iray ity, satria ireto farany tsy manana ireo torolàlana vaovao ireo.
Gentoo, amin'ny alàlan'ny fampidinana ny kaody loharano sy ny fanangonana azy ho an'ny mpanodina manana anao, dia hanararaotra ny fahaizany feno, satria raha apetrakao amin'ny i7 dia hampiasa ny torolàlana momba an'io, ary raha apetrakao amin'ny Pentium II, hampiasa ilay mifanaraka amin'ilay farany izy.
Etsy ankilany, azonao atao koa ny manamboatra karazana fanohanana tianao hananana fonosana. Mampiasa KDE sy Qt aho, ka tsy raharahako raha misy GNOME sy GTK ny fonosana, ka lazaiko aminao ny manangona azy ireo tsy misy fanohanana ho azy ireo. Amin'izany fomba izany, raha mampitaha ny fonosana mitovy amin'ny Gentoo sy amin'ny distro X dia maivana kokoa ny fonosana Gentoo. Ary satria ao amin'ny distro X dia mahazatra ny fonosana, hanana fanohanana izy ireo amin'ny zava-drehetra.
Ankehitriny, rehefa nanao fampidirana aho dia avelako ny rohy mankany amin'ny fisie fikirako izay miaraka amin'ilay torolàlana PDF nataoko momba ny fomba fametrahana Gentoo avy amin'ny Linux Live CD (Ubuntu, Fedora, SUSE, Backtrack, Slax, na izay mahazo azy ireo) na avy amin'ny fizarazaran'izy ireo manana Linux distro napetraka.
Ampidino ny tutorial fametrahana Gentoo Ampidino ny fikirako
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Gentoo Linux Torolàlana momba ny fametrahana tsikelikely
Juan Manuel Lopez placeholder image dia hoy izy:
Misy mahalala ny fametrahana mpamily nvidia miaraka amin'ny haitao optimus amin'ny kahie asus n61jv? Tsy azoko atao ny miasa ny carte vidéo… ampiasao fotsiny ilay karatra intel dia mandany ny bateria….
Valiny tamin'i Juan Manuel Lopez
voasivana dia hoy izy:
wow nitady zavatra toa an'io aho, mpampiasa windows aho fa ity distro ity dia nisarika ny saiko, antenaiko fa haiko tsara izany
Tsara !!! Ny fametrahana Gentoo amin'ny ampiasana ny fampiasana ny CHROOT dia nandatsaka hadisoana aho noho ny maritrano (raha ny fahitako azy) ilay CD mivantana nampiasako sy ilay navoakako hahaha.
Ka avereno indray ny fametrahana, rehefa afaka kelikely dia holazaiko anao ny fandehany>.
Ity torolàlana ity dia mbola misy ankehitriny
roni dia hoy izy:
Misaotra betsaka, manaraka ny tutorial aho, nanandrana nametaka gentoo imbetsaka aho, saingy nilavo lefona foana, ho hitantsika raha hahomby amin'ity indray mitoraka ity.
Valiny tamin'i Roni
Namana Manandrana misintona avy amin'ny pejy ofisialy aho (inoako): https://www.gentoo.org/downloads/
Ny fanontaniana dia hoe iza no ampidiniko ary inona ny mahasamihafa ny iray sy ny iray hafa, tonga ny fametrahana CD kely indrindra, Hybrid ISO ary ny Stage 3 ... Vaovao aho amin'izany, tiako ny raha manazava na manome rohy ahy ianao miaraka amin'ny info.